VaMnangagwa Voradzika Magamba Vachiti Vanhu Vabayiwe Nhomba Asi veMDC Alliance Vachiti Hadzisi Kuwanikwa Nyore
Mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa nemusi weMuvhuro vakakurudzira veruzhinji kuti vanobayiwa nhomba dzeCovid 19 vachiti vari kushushikana nekuparira kuri kuita chirwere ichi.
VaMnangagwa vakataura mashoko aya pamarinda anoradzikwa magamba enyika eHeroes Acre muHarare pakuradzikwa kwemagamba maviri anoti Liuetenant General Edzai Chimonyo naVaMichael Chakabva.
Kunyangwe hazvo mutungamiri wenyika ari kukurudzira vanhu kuti vabayiwe nhomba, mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance, VaClifford Hlatshwayo, vanoti mashoko haana zvaanoreva kana veruzhinji vasiri kukwanisa kuwana nhomba munzvimbo dziri kubaiwa nhomba idzi.
VaMnangagwa vakakurudzirawo zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvirambe zvakabatana pamwe nekurudzira runyararo munyika vachiti magamba enyika akaradzikwa neMuvhuro aya akarwira kuti munyika muve nerunyararo pamwe nebudiriro.
Vakataura vakamirira mhuri yekwaChimonyo uye vari munin’ina wemufi, VaGoldberg Chimonyo, vakati mukoma wavo aive munhu aida kushandira nyika yake.
Vakataura vakamirira mhuri yekwaChakabva uye vari zvakare munin’ina wemushakabvu, Apostle Luke Guvheya, vati nhoroondo yeZimbabwe inezvekuita nehondo yeChimurenga inofanirwa kunyorwa patsva vachiti pane zvakawanda zvisiri mumagwaro enhoroondo yenyika.
Lieutenant General Edzai Chimonyo vakafa svondo rapera mushure mekurwara nechirwere chegomarara. VaChimonyo vakarwa muhondo yeChimurenga vakazopinda muchiuto nyika yawana kuzvitonga kuzere muna 1980.
Muna 2008 vakazoendeswa kunoshanda vari mubazi rezvekunze kwenyika kwavakazotorwa kuti vanomirira Zimbabwe kuTanzania kusvika muna 2017 pavakadzoswa vachiitwa mukuru wemauto vachitora chinzvimbo chaive china VaValerio Sibanda vave mukuru wemauto ose.
Vamwewo vanoti havafari nezvakaitwa naVaChimonyo vari muchiuto pakaurayiwa vanhu vakawanda neFifth Brigade kuMatabeleland neMidlands munguva yeGukurahundi. Vaimbova mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe vakati yaive nguva yekupenga uye VaMnangagwa vakati vanhu vakasungunuka kutaura nezvenyaya iyi. Asi hurumende haisati yakumbira ruregerero pakuurayiwa kunonzi kwakaita vanhu zviuru makumi maviri kuMidlands neMatabeleland.
VaChakabva, avo vakaradzikwawo paHeroes Acre, avo vaizivikanwa nezita rekuti Cde Vhuu, pamwe nerimwe gamba renyika raradzikwawo nhasi, VaAbraham Nkiwane, vanonziwo vakashanda zvakasimba kuwanisa varwi vehondo yeChimurenga zvombo.
VaNkiwane vakaradzikwa kupurazi ravo reJoyful Farm kuUmguza mudunhu reMatabeleland North uye vemhuri yavo vanoti vakataura vachiri vapenyu kuti vakange vasingade kuvigwa paHeroes Acre.